Intelligent Electric Toy Manufacturers & Suppliers - China Intelligent Electric Toy Factory
Imikhiqizo yethu ikhonjwe ngokubanzi futhi ithembekile ngabantu futhi ingahlangana ngokuqhubekayo iguqula izidingo zezimali nezenhlalo ze-Intelligent Electric Toy,,,, Samukela amakhasimende amasha namadala avela kuzo zonke izizinda zokuxhumana ukuze asithinte ukuze sibe nobudlelwano bebhizinisi besikhathi esizayo kanye nempumelelo efanayo! Ngobuchwepheshe bethu obuholayo ngasikhathi sinye nomoya wethu wokuqamba izinto ezintsha, ukubambisana, izinzuzo nokukhula, sizokwakha ikusasa eliqhakazile kanye nenkampani yakho ehlonishwayo ye-Intelligent Electric Toy, Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende athile ngakunye insizakalo ephelele kakhulu nokuthengiswa kwekhwalithi okuzinzile. Samukela ngokufudumele amakhasimende emhlabeni wonke ukuthi asivakashele, ngokubambisana kwethu okunezinhlangothi eziningi, futhi ngokuhlanganyela sithuthukise izimakethe ezintsha, sakhe ikusasa eliqhakazile!
Uchungechunge Iwayini Ibhodlela Cat Toy
Π I-Series Wine Bottle Cat Toy isebenzisa ukwakheka kwe-tumbler ngokubukeka okufana nebhodlela lewayini futhi kungazungeziswa kalula ngama-degree angama-360. Isistimu yenzwa eyakhelwe ngaphakathi ehlakaniphile ibona ukuvulwa kokhiye owodwa nokuvala ngokukhalipha. Umzimba webhodlela wakhelwe njengethangi lokugcina ukudla, elingaklomelisa ukudla noma ukudla okulula ngenkathi udlala imidlalo. Ngaphezu kwalokho, ukuze uthole isipiliyoni esingcono sekati elihlekisayo, ngemuva kocwaningo oluphindaphindiwe nokuhlolwa kwekati’Uthando lwezesekeli ezahlukahlukene, ekugcineni sinqume izesekeli ezintathu ukwanelisa ikati’ilukuluku.
Uchungechunge lweKati Teaser Stick Toy
Π Uchungechunge lweKati Teaser Stick Toybabe bobunjwa abahlukahlukene abathandekayo, abagcwele injabulo. Izinhlobo eziyisikhombisa zokulunywa kweglue zenza ikati lingakhathali ukudlala, linelise ilukuluku lekati. Izitayela ezahlukahlukene ngesonto elilodwa, impilo yekati ayisadina.
Izikulufu - Izindlela ezahlukahlukene zokugcona ikati, azikwazi ukuma nhlobo
I-Cactus - Yonke ikati iyahlanya nge-cacti
Ibhulashi lamazinyo - Lifanelana nomlomo wekati ukuze amazinyo ahlanzwe kahle
Amakhowe - ngenza imali yokondla umndeni, uyadla, uphuze futhi ujabule
I-Penguin - I-penguin enhle, ayikwazi ukumisa ikati ekudlaleni
Igundane - Iphupho leJERRY, imodi yokuzingela ngemizuzwana
Ithambo lenhlanzi - Kusukela namuhla kuqhubeke, izinhlanzi zami uzonikezwa wena kuphela
Intelligent Rolling Electric Ball
I-Intelligent Rolling Electric Ball ayigcini nje ngokuba yibhola lokudlala likagesi elikwazi ukugoqa ngezikhathi ezithile ama-degree angama-360 ngaphandle kweziphetho ezifile, kepha futhi lingasetshenziswa njenge-dispenser yokudla okufuywayo. Umzimba wenziwe ngezinto zokuvikela imvelo zebanga lokudla ze-ABS, ezingezona ezinobuthi futhi ezingenabungozi, izilwane ezifuywayo zingakhotha ngokukhululekile, zilume futhi ziklwebhe. I-Intelligent Rolling Electric Ball inemisebenzi yobungani obuhlakaniphile, ikati elihlekisayo elinokukhanya okubomvu, ukuvula ukhiye owodwa, ukugingqa nokuvuza ukudla, ukugwema izithiyo okuzenzakalelayo, nensimbi encane yomsila.
I-Double-End Laser Cat Stick C031
I-Double-End Laser Cat Stick C031 idizayina ikhanda libe isitayela sekhanda lebhere elimnandi, elandisa intshisekelo yalo. Okokusebenza, sisebenzisa impahla ebangeni lokudla eqinisekiswe yi-FDA, engenabungozi futhi enobungani bemvelo. Umzimba wenduku owakhiwe ngamabhulokhi ombala ahlukile nawo uzowenza uthandeke ngokwengeziwe. Kunezitayela zombala ezintathu: White & Avocado Green, White & Cherry Blossom Pink, White & Orange.
Ukusebenza, i-Double-End Laser Cat Stick C031 inezindlela zokudlala ezishintshashintshayo. Ekupheleni kwekhanda elincane lebhere, lingasetshenziswa njengenduku ehlekisayo yekati, elawulwa yinkinobho yokwenza intambo ihoxiswe. Ngakolunye uhlangothi, kunenye inkinobho yokuvula noma ukucisha i-laser light, ukuze abantu bakwazi ukuyisebenzisa ukudlala nezilwane ezifuyiwe.
I-Double-End Laser Cat Stick C030
I-Double-End Laser Cat Stick iyitoyitoyi lekati elihlekisayo elinezindlela ezahlukahlukene zokudlala ezihlanganisiwe. Uma ingasetshenziswa, lonke shaft cishe liyi-20 cm. Ingabekwa kalula ekhabetheni noma ebhokisini lesitoreji ngaphandle kokuthatha isikhala, noma ingafakwa ephaketheni noma esikhwameni sebhulukwe futhi iphathwe nawe. Kunezigaba ezine zezinsika zensimbi ezifihliwe emzimbeni wenduku, ezelulela ebangeni eliphelele elingaba ngamasentimitha angama-52, futhi ungaqala ukudlala ngekati. Isihlilingi se-telescopic esingu-35 cm silawulwa yinkinobho ukuze siqhubeke nokunweba ubude baso futhi sixhumane nekati ngokuvumelana nezimo. Kuza okujwayelekile ngezimpaphe ezenzelwe okuningi namabhola aminyene, angashintshwa kalula ngengidi. Ngaphezu kwalokho, ngakolunye uhlangothi lomkhiqizo, imodi ye-laser nayo ingavulwa ngokucindezela inkinobho ukwanelisa ikati’Ukujaha imvelo.
Ukuxazulula kanjani ukukhathazeka ngesimo sekati lapho abazali bekati bengekho ekhaya, ikakhulukazi emindenini enekati elilodwa vo, kungenye yezinkinga esizinaka kakhulu ekukhiqizeni amathoyizi wekati yezilwane ezifuywayo. ILittle Toy Bear Rotating Laser isize umnikazi wekati ukubhekana nale nkinga kahle kakhulu.